OEM & ODM peps umgogodla unogada Uhlu Lwamanani | Rayson
Idizayini eyingqayizivele enenhlanganisela ephelele yejeli negwebu lenkumbulo yesimanje - itholakala ngezinketho ezintathu zokunethezeka ukuze uqinisekise ukuthi uzothola ekufanele. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda ukuthi uthambile, umaphakathi noma uqine, I-Silent Night Mattress ifaneleka kahle indlela olala ngayo.
Umatilasi ufika ugoqwe ngobuhlakani, ufakwe ebhokisini futhi kulula ukuwuphatha. Uma usunqumile umatilasi we-Silent Night okulungele, ungahlala, uphumule futhi ulinde ukuthi ufike. Ngeke ulinde isikhathi eside nokho ngesevisi yethu yokulethwa okusheshayo.
Ihlala ilwela ukwenza kahle, uRayson usethuthuke waba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amakhono ocwaningo lwesayensi kanye nokuqedela amabhizinisi esevisi. Simise umnyango wesevisi yamakhasimende ukuze unikeze kangcono amakhasimende amasevisi asheshayo okuhlanganisa nesaziso sokulandelela i-oda. I-peps spine guard uRayson ungumkhiqizi obanzi kanye nomphakeli wemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesevisi eyodwa-stop. Sizohlinzeka, njengenjwayelo, ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana ne-peps spine guard kanye neminye imikhiqizo, vele usazise.Umkhiqizo awunawo ama-selvage amabi. Izindlela zokuthunga ezivuthiwe nokuthunga ziyamukelwa ukuze kuqedwe futhi kunqunywe iziphetho zendwangu.